ရုိဟင္ဂ်ာဂ်ီႏုိဆုိက္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ သက္ေသအေထာက္အထားေတြ ဘယ္သူေတြဆီမွာ ရွိေနလဲ? | Rohingya Today
ရိုဟင်ဂျာဂျီနိုဆိုက်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သက်သေအထောက်အထားတွေ ဘယ်သူတွေဆီမှာ ရှိနေလဲ?
ယျာတင် (ရိုဟင်းသား) Jan 05, 2019 Rohingya Today
AP သတင်းဌာနမှ ၂၀၁၈ ဖေဖော်ဝါရီတွင် ဖော်ပြခဲ့သည့် ဗီဒီယိုမှ screen grab
"ပြည်ထောင်စုအမည်ခံမှ ခွဲထွက်လို၍ ရေးတဲ့စာ" ခေါင်းစဉ်ဖြင့် Facebook ပေါ်ရေးတင်သည့် ရခိုင်လူမျိုး သတင်းထောက်တစ်ဦးဖြစ်သည့် ကောင်းမြတ်နိုင်၏ ဆောင်းပါးတွင် မြန်မာလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များက ရိုဟင်ဂျာများအပေါ် လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခဲ့သည့် အထောက်အထားပေါင်းများစွာ ရခိုင်များ၏လက်ဝယ်၌ ရှိနေသည်ဟု ရေးသားထားသည်။
လတ်တလောကာလတွင် ရက္ခိုင့်တပ်မတော် (AA) နှင့် မြန်မာလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များအကြား တိုက်ပွဲများ အပြင်းအထန်ဖြစ်ပွားနေပါသည်။ ဇန်နဝါရီလ ၄ ရက်နေ့တွင် AA က ဘူးသီးတောင်မှ နယ်ခြားစောင့်ရဲစခန်း လေးခုကို တစ်ပြိုင်နက်တည်း စီးနင်းဝင်ရောက် တိုက်ခိုက်ရာတွင် နယ်ခြားစောင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ ၁၃ ဦး ကျဆုံးခဲ့ပြီး တစ်ဒါဇင်ကျော်ကို စစ်သုံ့ပန်းများအဖြစ် ဖမ်းဆီးသွားခဲ့သည်။ ထိုတိုက်ပွဲနှင့် ပတ်သက်၍ လူမှုကွန်ရက်ပေါ်၌ ဗမာလူမျိုးများက ရခိုင်လူမျိုးအပေါ် အမျိုးမျိုး ပုတ်ခတ်ပြောဆိုနေသည်ကို ကောင်းမြတ်နိုင်က ဆောင်းပါးရေးပြီး တုန့်ပြန်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
AA သည် ASRA နှင့် ပေါင်းသွားခဲ့လျှင် မြန်မာအစိုးရနှင့် မြန်မာစစ်တပ်ကို စစ်တိုက်စရာမလိုဘဲ R2P ဝင်လာစေနိုင်သည့် အခြေအနေအထိ ရှိနေကြောင်း ကောင်းမြတ်နိုင်က ဆောင်းပါးတွင် ဤသို့ရေးသားထားသည်။
"ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ မြန်မာအစိုးရနဲ့ မြန်မာစစ်တပ်ကို ခေါင်းခဲစေတဲ့ ဘင်္ဂလီအရေးကို ရခိုင်လူမျိုးတွေက ပိုသိပိုနားလည်သလို ၂၀၁၆ ၂၀၁၇ မောင်တောဒေသက ဘင်္ဂလီပြဿနာတွေတုန်းက မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ မြန်မာအစိုးရရဲ့လုပ်ရပ် လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေကို ရခိုင်တွေ အသိဆုံးဖြစ်သလို သက်သေအထောက်အထားတွေဟာလည်း ရခိုင်တွေလက်ထဲမှာ ရှိနေဆဲပါဘဲ" ဟု ဖြစ်သည်။
ထိုအထောက်အထားများကို ပြည်ထောင်စုစိတ်ဓာတ်ကို ရှေ့တန်းထား၍ အပြင်သို့ထုတ်မပြခြင်းသာ ဖြစ်ကြောင်း၊ မြန်မာစစ်တပ်ကို အများကြီး ပြဿနာတက်အောင် လုပ်နိုင်သည့်အခွင့်အရေးမှာ ရခိုင်များ၏ လက်ထဲ၌သာ ရှိကြောင်း ၎င်းက ဆောင်းပါးတွင် ရေးသား သတိပေးထားသည်။
လွန်ခဲ့သော ၂၀၁၇ ခုနှစ်၌ အာဆာအဖွဲ့နှင့် မြန်မာလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တို့အကြား ထိပ်တိုက်တွေ့ခဲ့မှုဖြစ်စဉ်နောက်တွင် မြန်မာလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များက နယ်မြေရှင်းလင်းရေး ခေါင်းစဉ်တပ်ကာ ရိုဟင်ဂျာများအပေါ် အစုလိုက်အပြုံလိုက် သတ်ဖြတ်မှုများ၊ ကျေးရွာများ မီးရှို့ခဲ့ခြင်းများ၊ အမျိုးသမီးများအပေါ် အဓမ္မပြုကျင့်မှုများ၊ တိုင်းပြည်မှ အတင်းနှင်ထုတ်ခဲ့မှုများ ကဲ့သို့ ကြီးမားသော လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများကို ကျူးလွန်ခဲ့သည်။ ဤသည်ကို နိုင်ငံတကာပညာရှင်များ၊ လူ့အခွင့်အရေး စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ၊ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံကြီးများက လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှု (Genocide) ပြစ်မှုမြောက်သည်ဟု သတ်မှတ်ခဲ့ပါသည်။ ထိုအထဲတွင် ရိုဟင်ဂျာများ အထိနာဆုံး ကျူးလွန်ခံရသော "တူတာတူလီ၊ ချွတ်ပြင်၊ ဂူတာပြင်၊ ဖောင်တောင်နှင့် ကွမ်းသီးပင်ချောင်းဝ" ကျေးရွာများ၏ ဖြစ်စဉ်များသည် ကမ္ဘာကျော်ခဲ့ပြီး ထိုကျေးရွာများအပါအဝင် အခြားဒေသများတွင် မြန်မာလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များ၏ ရိုဟင်ဂျာများအပေါ် လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခဲ့မှု မျက်မြင်သက်သေနှင့် မှတ်တမ်းမှတ်ရာအထောက်အထားများသည် ရခိုင်လူမျိုးများ၏ လက်ထဲတွင် များစွာရှိနေကြောင်း ကောင်းမြတ်နိုင်၏ ဆောင်းပါးတွင် ပါရှိပါသည်။
ဘူးသီးတောင်မြို့နယ် ဂူတာပြင်ကျေးရွာတွင် မြန်မာစစ်တပ်က ရိုဟင်ဂျာများကို သတ်ဖြတ်၍ အစုလိုက်အပြုံလိုက်မြှပ်ထားသည့် ကျင်း ၅ ကျင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလတွင် ရိုဟင်ဂျာဘလောဂါ ရိုနေဆန်းလွင်က ထုတ်ဖော်ရေးသားခဲ့သည်။ ယင်းဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ ရခိုင်လူမျိုးများက အထောက်အထား စုဆောင်းခဲ့သည်ကို ဂူတာပြင်ရွာသားများ ပြန်ပြောပြ၍ မှတ်သားခဲ့ဖူးသည်။ ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရက ကျင်း ၅ ကျင်းနှင့် ပတ်သက်၍ စုံစမ်း စစ်ဆေးရန် ၁၇ ဦးပါဝင်သည့် အာဏာပိုင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကို ဂူတာပြင်ရွာသို့ စေလွှတ်ခဲ့သော်လည်း ၎င်းတို့က ကျင်းများရှိရာ နေရာများသို့ သွားရောက်ခြင်းပင် မပြုလုပ်ခဲ့ပေ။ သို့သော်လည်း ရခိုင်အမျိုးသားနှစ်ဦးက စ.ရ.ဖ ဝန်ထမ်းများအဖြစ် ဟန်ဆောင်၍ ရွာထဲသို့ ဝင်ရောက်၍ လိုအပ်သည့် ဓါတ်ပုံ၊ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း အထောက်အထားများ ယူခဲ့သွားသည်။ ရွာမှ ပြန်ထွက်လာစဉ် အာဏာပိုင်အဖွဲ့ကို တွေ့သဖြင့် ပုန်းအောင်းနေခဲ့သောကြောင့် ၎င်းတို့သည် စ.ရ.ဖ ဝန်ထမ်းများ မဟုတ်ဘဲ သာမာန်ရခိုင်အရပ်သားများ ဖြစ်ကြောင်း ရွာသားများ သိရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ရခိုင်လူမျိုးများ၏ လက်ထဲတွင်ရှိသော အထောက်အထားများ နိုင်ငံတကာရှေ့မှောက်၌ သက်သေခံလိုက်ရုံဖြင့် ရခိုင်ပြည်နယ်ကို မြန်မာနိုင်ငံထဲမှ ခွဲထွက်ယူနိုင်ကြောင်း ကောင်းမြတ်နိုင်က ၎င်း၏ ဆောင်းပါးတွင် ထည့်သွင်းရေးသားထားပါသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲက လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများ ကြောင့် မြန်မာအစိုးရ တာဝန်ရှိသူများ ICC မရောက်ပါစေဖို့ ဆုတောင်းပေးပါသည် ဆို၍ ကောင်းမြတ်နိုင်က ၎င်း၏ ဆောင်းပါးကို အဆုံးသတ်ထားပါသည်။